Flying. Not Falling…. – PVTV Myanmar
·5months ago ·28 Comments
Flying. Not Falling.
အဆိုတော်ကျားပေါက် @ ဟန်ထူးလွင်က ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ် တီးခတ်ထားတဲ့ Instrumental piece တစ်ခုကိုတင်ပြီး #noisesofspringrevolution နဲ့ Hash Tag Campaign ကို စတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကို Credit ပေးပါတယ်။
Like – 9.1K Share – 686
Nun Pi says:
2021-08-11 at 6:24 PM
ရန်သူ့​ရှေ့မှာ ဒူး​ထောက် အရူံး​ပေးခြင်းထက်
တိုက်​ပေါ်က ခုန်ချ ခြင်းက
2021-08-11 at 6:33 PM
2021-08-11 at 6:34 PM
2021-08-11 at 6:37 PM
U Nyo says:
2021-08-11 at 6:42 PM
2021-08-11 at 6:52 PM
2021-08-11 at 6:54 PM
မင်းတို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းတို့ကိုနွေဦးတော်လှန်းရေးအတွက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ မင်းတို့ဒီကိုပြန်လာဖို့ဆိုတာတော့ငါတို့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့အပြစ်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့လတွေကပဲ ငါတို့ရဲ့​ေွေဦး​ေတလေှန်း​ေရးသူရဲကောင်းများအသက်စွန့်သွားရတယ် ဒီနေ့နေ့မှာတော့ ရဲဘော်များမင်းတို့လဲအသက်စွန့်သွားရပြန်တယ် မင်းတို့ကငါတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုလို မိသားစုလိုပါပဲ မင်းတို့ကိုနွေဦးတော်လှန်းရေးသူရဲကောင်းများအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားမှာပါ မင်းတို့လဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်သလို ကျန်တဲ့မင်းတို့နဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးလဲမင်းတို့လိုပဲတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတိနိုးကြပါတယ် မင်းတို့နဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ် မင်းတို့ရဲ့မွေးမေမေ မင်းတို့ရဲ့ဆရာတွေ မင်းတို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးက မင်းတို့အတွက်ငါနဲ့အတူကောင်းရာရောက်ဖို့ဆုတောင်းလိုက်တယ် ခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့ကငါတို့ရဲ့မိသားစုထဲကခွဲထွက်ခဲ့ပြီး မင်းတို့ဖာသာသွားလိုရာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားပါတော့ ငါတို့နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားဆန္ဒပြုပါတယ်…. အလေးပြု
2021-08-11 at 7:10 PM
လေးစား ဉီးညွှတ်ပါတယ်။ ကြယ်ကလေးတွေ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာရှိကြပါစေ။
နောင်ဘဝ စိတ်နှလုံး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေ။ကြယ်ကလေးတွေ…..
2021-08-11 at 7:33 PM
Zaw May Win says:
2021-08-11 at 7:49 PM
​နောင်ဘဝဆက်တိုင်း အခုလိုအ​ကြွေ​စောတဲ့ ကြယ်​လေး​တွေမဖြစ်ပါ​စေနဲ့
Nwe Nwe Khaing says:
2021-08-11 at 8:20 PM
2021-08-11 at 8:21 PM
Thinn Hmone says:
2021-08-11 at 8:31 PM
Ma Thin Thin says:
2021-08-11 at 8:43 PM
Daw Shain Lai says:
2021-08-11 at 9:04 PM
2021-08-11 at 9:18 PM
ပေးဆပ် ဘာရယ်မသိ လမ်းမရှိ
ရုန်းထ ကုန်းထ ကိုယ့်၀န်ကို ကိုယ် မသိ
အပေါ် တက်ချင်သူများ /အောက်ဆင်းချင်းသူများ အတွက် အသင့်ပါ….
အချိန်ဟာ ဘ၀ တဲ့ ..
ချိုလိပ် ဆိုခဲ့ရတဲ့ ဘ၀
ဝေ့ဝါး မျက်ရည်တွေ ကျခဲ့ဘူးပီ
ကျနော်တို့ ခေါင်း(ဂေါင်း) ချမယ့်နေရာ
Mar Mar Lay says:
2021-08-11 at 10:33 PM
2021-08-12 at 10:39 AM
မနက်ခင်း ကြားလိုက်ရတဲ့ ခေါင်းကြီးသတင်း
ကြယ်ငါးစင်း ကောင်းကင်ပေါ်က ကြွေဆင်း
ပျံသန်းသွားတယ် အထက်ဆီ “အလွှတ်ကြီး ခုန်ချသွားတာပါဗျာ…” ”Ayy!
ဒီဘဒ္တကမ္ဘာမှာ အဲ့သတ္တိ မရှိသေး။
မင်းတို့”အောက်တော့ လိ့မှ ဒူးမထောက်ဘူး….
2021-08-12 at 10:46 AM
ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ထိ ဒူးမေထာက္ လက္မေျမွာက္ခဲ႔တဲ႔ သူရဲေကာင္းမ်ား RIPပါ
Šhwē Ýonê Pĥÿu says:
2021-08-12 at 12:01 PM
အပေါ်ကနေ ဘယ်လိုသတ္တိမျိုးတွေ မွေးခဲ့မလဲ
2021-08-12 at 1:50 PM
သူတို့ဒီလိုမဆုံးဖြတ်ခင် ဘယ်လောက်ထိ ဗလောင်ဆူပီး ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရလဲ တွေးမိတိုင်းရင်နာတယ် ငိုမိတယ် ..
ဒေါက်တာဖြိုးသီဟရေးသားတဲ့ “ကိုဗစ် ၁၉ သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်ကြွက်ထောင်ချောက်ပုံပြင်” ကိ…